» Deg deg ah: Shil Gaari oo ka dhacay magalada Hargeeysa + wariye caan ah oo ku geeriyooday …..
Deg deg ah: Shil Gaari oo ka dhacay magalada Hargeeysa + wariye caan ah oo ku geeriyooday …..
Jun 29, 2015 - jawaab
ShareWararka ka imaanaya dhanka Somaliland ayaa sheegaya in shil gaari oo sababay dhimashada sedex ruux uu ka dhacay wadada isku xirta Magaalooyinka Barbara iyo Hargeysa.
Shilka ayaa asiibay gawaari la socday wafdi ay hogaaminaysay wasiirka maaliyada Maamulka Somaliland waxaana hakaasi ku dhintay mas’uul ka tirsanaa wasaarada Maaliyada iyo wariye ka howlgalayay TV-ga Horn Cable.
Mas’uulka wasaarada Maaliyada ka tirsanaa ee dhintay waxaa lagu magacaabi jirey Wali Xaaji Da’uud halka wariyaha dhintay isna lagu magacaabi jirey Maxamed Daa’uud kaasoo ka mid ahaa wariyayaasha TV-da Horncable.
Wafdiga Wsiirka Maaliyada Somaliland waxay ku sii jeedeen Magaalada Bar Bara halkaasoo arimo shaqo ay u aadeen walow dhibaatadaani timid lamana yaqaan inuu hakin doono socdaalka wasiirada iyo inay sii wadan doonto.
Inta badan gawaarida Mas’uuliyiinta la socota ha noqdaan kuwa dagaalka ama kuwa kale waxay ku socdaan xawaari heerkiisu sareeyo taasoo keenta shil nuucaani oo kale ah.